के ढाँट्नु, एक जनालाई प्रेम गर्छु : अभिनेत्री शिवानी गिरी  Hamrosandesh.com
के ढाँट्नु, एक जनालाई प्रेम गर्छु : अभिनेत्री शिवानी गिरी
चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ अभिनेत्री भित्रिने क्रम बढ्दो छ । यस्तैमा सिक्किमकी शिवानी गिरीले पनि अभिनयमा डेब्यु गरेकी छन् । उनी अभिनित ‘कहीँ कतै’ चलचित्र यही २५ साउनबाट देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । सविर श्रेष्ठको निर्देशन रहेको ‘कहीँ कतै’मा आफू ‘इनोसन्ट’ भूमिकामा देखिन लागेको उनले बताइन् । बोल्ड नायिकाको छवि बनाएकी उमा ‘बेबी’ गिरीको निर्माण रहेको ‘कहीँ कतै’मा उनको जोडी अभिनेता सोनम बरफुङ्पा बनेका छन् । सोनमसम्मको फिल्मी रोमान्स राम्रो बनेको बताउने उनी मिस भारत र मिस हिमालयनकी फस्ट रनरअप विजेतथा पनि हुन् । उनको चलचित्र अभिनय ‘सपना’ पनि हो । भर्खर प्लस टु सकेकी उनको रुचि मोडलिङ, नाच्न, गाउन र खेलतिर पनि रहेको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी र्याम्पवाक गरेकी उनी म्युजिक भिडियो अभिनय रहर मनमा रहेको सुनाउँछिन् । यी नै अभिनेत्री शिवानी गिरीसँग रातोपाटीको दस प्रश्न ।
‘कहीँ कतै’ डेब्यु चलचित्र हो, होइन त ?
– हो, त्यसैले त चलचित्रको प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा म केही नर्भस र अलिअलि डराएकी छु । चलचित्र दर्शकको रुचिमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने चिन्ताले पनि सताएको छ । किनभने यो आफ्नै होम प्रोडक्सनको च
लचित्र पनि हो ।
राम्री देखिनुभाको छ नि ?
– धेरै राम्री त छैन तर ममीले बिहान उठेर ऐना हेरेर आँखा झिम्क्याउनु भन्नु हुन्छ । यसो गर्दा आफूलाई राम्रो सोच्नुपर्छ भन्नु भएको छ । म पनि पोजेटिभ थिङ्क राख्ने खालकी छु । राम्री देखिन धेरै मेकअपको प्रयोग गर्दिनँ । हल्का क्रिम पाउडर लगाउन रुचाउँछु । लिपस्टिक र गाजल पनि नियमित लगाउने मेकअपका साधन हुन् । म अलि स्टाइलिस छु । केटी मान्छे भएपछि हल्का इस्टाइलिस पनि बन्नुपर्दाे रहेछ ।
एक्सरसाइज गर्नु हुन्छ ?
– एकदमै अल्छी छु म । अहिलेसम्म आफूलाई फिट राख्न एक्सरसाइजको आवश्यक परेको पनि छैन । भर्खर टिनएज पार गरेँ । उमेर बढ्दै जाँदा फिटनेस त गर्नुपर्ला ।
फेसनतिर त पक्कै रुचि होला ?
– धेरै रुचि छ । मेरा आफन्त पनि फेसन डिजाइनर छन् । आफन्तबाट मैले फेसन के हो, किन आवश्यक छ भन्ने सिक्ने अवसर पाएँ । कुन समयमा, कस्तो इभेन्टमा के पहिरन भन्ने सबै जानकारी छ । खुल्ला खालको टिसर्ट र पाइटको अलवा स्कर्ट मेरो मनपर्ने पहिरन हो । गाउन पनि धेरै प्रयोग गर्ने गरेकी छु ।
पूरा नभएको सपना छैन ?
– छैन भन्दा हुन्छ । केही पहिले गीत गाउने रहर थियो । त्यो पनि ममीले एक गीत रेकर्ड गराएर पूरा गर्दिनुभयो । चलचित्र अभिनयको रहर थियो । त्यो चलचित्र ‘कहीँ कतै’ले पुर्यायो ।
मनपर्ने गायिका ?
बलिउडकी लता मङ्गेस्कर
कस्तो केटी ?
– बोल्ड केटी हँु ।
फुर्सदको समय ?
सङ्गीत र इन्टरनेटमा रमाउँछु ।
–स्मार्ट, अलिकति एटिच्युट भएको, अरूको ख्याल गर्ने र बुझ्ने केटा मनपर्छ ।
प्रेम छ ?
के ढाँट्नु, हैन । छ । नाम अहिले लिन सक्दिनँ । एक जनालाई प्रेम गर्छु । डेट पनि उसैसँग गर्ने गरेकी छु ।